Bandhigga warbixinta Himilooyinka Horumarinta Millennium-ka ee Soomaaliya:
SOMALITALK - UNDP
Himilooyinka Horumarinta Millennium-ka ee Soomaaliya:
MDG Report (English Version) Size:1.54 MB
MDG Report (Somali Version) PDF
Bishii Sibtember 2000, 147 Hoggaamiyayaal waddan iyo dawlado wadar ahaan gaarayey ilaa 191 ayaa meel-mariyey Baaqa Millennium-ka oo xambaarsanaa Nabadgalyo, xasilooni iyo arrimo dhinaca Horumarinta la xiriiray. Intaas waxaa weheliyey sida ay ugu dhaqaaween taageerada dhinacyada dimuqraadiyada iyo Xuquuqda bini’aadmiga, waxayna dejiyeen siddeed Himilo oo taageerayeen bartimaameedyo gaar ah oo ku wejahnaa horumarinta iyo ciribtirka saboolnimada, si loogu guulaysto sannadka 2015.
Warbixintan HHM-ku waxay sawir kooban ka bixinaysaa horumarka Soomaliya ee ku wejahan meel marinta bartilmaameedyadan oo dhab ahaantii barta kala qaybisa inta u dhaxaysa min bilowga 2000 iyadoo la qorsheeyey in ka xaqiijin doonon sannadka 2015.
Deegaanka Soomaaliya waxa soo maray dhibaatooyin lixaad leh oo ay saameeyeen dagaalladii sokeeye iyo nabadgalyo la’aantii jirtay in ka badan 16 sano, taas oo ay si ba’an u waxyeeleeyeen misiibooyin kale oo dabiici iyo dad samee ah sida abaaraha, daadadka iyo adeegsiga miino-dhuleedka.
Qiyaastii in ka yar nus. Dadweynaha Soomaaliyeed ayaa ku nool saboolnimo xad-dhaaf ah kuwaas oo dakhligoodu ka yar yahay hal US$ maalintii, halka seddex meelod meel ay ku nool yihiin saboolnimo in ka yar labo US$ maalintiiba.ilaa 400,000 oo soomaali ah(qiyaastii 7% dadweynaha)ayaa gudaha ku bara-kacay(IDP) iyadoo haweenka iyo carruurtu ay saamayn weyn ku yeesheen.
In ka yar shan meelood meel Soomaalidu waa dad aan aqoon lahayn, dalkuna waa kan ugu hooseeya heerka ku biiritaanka Dugsiyada waxbarashada qiyaaas ahaan(18.8%).Saboolnimada, gaar ahaa miyiga oo ay weheliyaan saamaynta ay dagaallada sokeeye ku yeesheen aya lagu qiyaasay ilaa 1.5 milyan oo carruur ah inay ka horjoogsadeen dugsiyadii ay tegoi lahaayeen. Furasadaha waxbarashada iyo xirfad la’aanta awgeed ayaa u horseeday in dhallinyaro badan meelaha qaarkood inay ku biiraan maliishiyada hubaysan oo u noqotay tub ay nolol ka helaan.
Dhinaca dhegddig-laboodka ayaa iyaguna ah arrim mudnaan gaar ah leh,iyadoo tiro gabdho ah oo aad uga yar wiilashu ay dugsiyada tagaan.
Natiijada waxbarasho la’aanta dheddigga- oo ay bar-bar socdaan arrimha kale ee dhaqanka iyo bulshada-ayaa gacan ka gaysta dhibaatooyinka la xiriira fursadaha xogta daryeelka caafimaadka, taas oo gacan ka gaysata kororka xaddiga dhimashada hooyada uurka leh taas oo ka mid ah kuwa dunida ugu liita.
Dhimashada Carruurta iyo dhallaanka, ayaa iyaguna ugu sarreeya dunida.cudurrada shubanka,caabuqa neefmareennada iyo duumada ayaa iyaguna dilaagga ugu ba’an, iyadoo daryeelka caafimaadkana ay saboolnimadu xakamaysay.
Xaalufka baahsan ayaa caqabad ku noqday heer-nololeedka bulshada, taas oo sii xoojisay cabsidii ka dhalatay burburkii qotada dheeraa ee hore u saameeyey deegaanka. in ka yar nus dadweynaha ayaa hela fursado faya-dhawr iyo in ka yar afar-meelood oo hela fursad biyo-nadiif ah. Loolanka ilaha biyaha ayaa xilliyada abaabraha iska-horimaadyo ay ka dhashaan.
Adeegyada asaasiga ah iyo fursadaha suugayntu waa ay xaddidan yihiin, iyadoo caqabado dheeraad ahna lagala kulmo dhinca kobcinta dhaqaalaha. Maadaama ay maqan yihiin hay’adihii dawliga ahaa, waxaa fursadihii adeegyada buuxiyey hay’adaha gaarka ah, bulshada maxaliga ah iyo ururrada bulshada halkaas oo ay ka soon if-baxeen hannaan loogu adeegayo baahida asaasiga ah ee dadweynaha.
Nooca iskaashiyeed ee ku dhisan maxalliga iyo heer gobol iyo hay’adaha caalamiga ah oo gacan ka gaysta heer qaran si goobaha qaarkood loo xaqiijiyo HHM-ka. Barnaamijyada iyo hawlgallada ayaa xoojiyey kororka ku biiritaanka dugsiyada hoose/dhexe, hoos-u-dhigidda dhimashada carruurta, kobcinta caafimaadka hooyada iyo xakamaynta saboolnimada xad-dhaafka ah iyo gaajada.
Dhanka kale, qaar ka mid ah tilmaamayaasha ayaa iska taagan ama xitaa sii xumaaday, iyadoo qaarna aan la qiyaasi Karin iyadoo aysan jirin xog sugan oo laga hayo.
Somaaliya hoos uma dhigi karto saboolnimada,mana xaqiijin karto HHM-ka haddii aysan dardar gelin kordhinta dhaqaalaha. Beeraha, Xoolaha iyo Kalluumaysigu waa laf-dhabarka dhaqaalaha, waana inay xuddun u noqdaan istraatiijiyada hoos-u-dhigidda saboolnimada. U suuragelinta deegaanka dhinaca maalgashiga ganacsiga yar yar, iyana waa muhiimad la mid ah. Maadaama saboolnimadu ay sii kordhisay kharat dagaalka sokeeye iyo ammaan darrida, hoos-u-dhigidda saboolnimadu waa muhiim. Haddii aan nabadgelyo iyo amaan la leh, waxba lama xaqiijin karo.
HHM-ku waxay matalaysaa heshiis u dhexeeya waddamada saboolka ah iyo beesha caalamka inteeda kale. Waxay Soomaaliya u baahan tahay iskaashi waddamada deriska ah iyo mid baahsan oo ay la wadaagto deeq-bixiyayaaha.haddii dalku uu ka soo kabanayo sanooyinkii dagaalka, ayna u hawlgalaan muwaadiniintiisa. Warbixinta HHM-ka ee Soomaaliya waxay tilmaamaysaa baahida dadaal dheeraad ah oo dhammaan lagu xoojinayo asaaska toganaha ah ee loo dhigayo xaqiijinta inaan dalku mar kale dib ugu laaban colaadihii hore u soo maray.
S iyo J
Ma jiraan wax ku cusub HHM-ka?
Taasi waa dhab, mana jiraan wax ku cusub ama muhiim ah arrimaha HHM-ka. Waxa cusub in la cusboonaysiiyo qaababka lagu ansixiyey heer caalami iyo Waddan ee lagu taabbagalinayo siyaasasaha la filayo inay horseed ka noqdaan guulaha HHM-ka.
Ugu horreyntii, Himilooyinku waxay leeyihiin bartilmaameedyo gaar ah oo tirsan. Tan labaad, waxay leeyihiin waqti sugan. Tan seddexaad, waxa jira waxqabad siyaasadeed iyo heshiisyo caalami ah oo lagu wejahayo saboolnimada bini’aadmiga taas oo ah ajendada saldhigga u ah iskaashiga caalamiga ah iyo caqabadaha waddamada hodanka ah ee ku wejahan deeqaha ay fidiyaan.
Dddhab ahaantii, Waa in Himilooyinku ay waafaqsan yihiin bartilmaameedyada lagu heshshiiyey ee heer qaran oo isku-dheellitirka rabitaanka iyo xaqiiqda jirta. Nidaamka QM wuxuu gacan ka siin doonaa waddanada dhismaha awoodaynta xirfadaha heer qaran iyadoo la deegsanayo xogta ku salaysan dejinta siyaasadda, barnaamijyada iyo sidoo kale, la socoshada iyo qiimaynta. Waxayna taageeraysaa horumarinta nidaamka tira-koob lixaad leh oo heer qaran iyo xog asaasi ah oo isticmaali doono hab-raacyada warbixinta oo laga diyaarinayo Himilo kasta.
2. Saamayn intee le’eg ayey HHM-ku ku yeelan karaa waddan ay xiisado ka jiraan sida Soomaaliya?
Waa arrin iska cad inay caabado la xiriira xaqiijinta xogta waddan ilaa nus ka mid ah dadweynihisu ay ku nool yihiin saboolnimo xad-dhaaf ah, kuwaas oo in ka yar Rubuc ay helaan biyo nadiif, balse maadaama ay arrimahan sin kooban u wejahayaan HHM-ka, dhab ahaantii way ku habboon yihiin Soomaaliya.
Waxay ku baahan doontaa dadaal weyn iyo iskaashi lagu xaqiijiyo Himilooyinka, islamarkaana xaaladda Soomaaliya sina uma fududa meel marinta arrimahan. Balse waxaa jira tallaabooyin ficil ahaan uga tarjumaya dadka Soomaalida oo si wacan noloshooda wax uga qaban karaan – waxa ay yihiinHHM-ka.Tusaale,waxaa ka jira in ka badan 400 xarumo caafimaad oo fuliya adeegyda daryeelka hooyada iyon dhallaanka, marxalada dhalmada ka horreeya iyo xilliga dhalmada, saamaynna ku yeeshay nafaqaynta hooyada iyo yaraynta dhimashada dhallaanka, tallaalka dhallaanka oo yareeya xaddiga dhimashada. Inskastoo aan la oran Karin adeegyadani waa ay sahlan yihiin mar walba, balse is-beddel ay samayn karaan, ayaa Soomaalida qudheedu gacan ka gaysan karaan.
Lix iyo tobankii sano ee ay colaaduhu ka jireen Somaaliya, kama aysan horjoogsan waajibaadka xaqiijinta HHM-ka; waxayna dhammaan muujiyeen muhiimad lixaad leh
3. Miyey caddahay inay Soomaaliya fursad yar ku xaqiijin karto HHM-ka. Maxaa la qaban karaa si arrimahan loo dhaqaajiyo?
Dhab ahaantii, dhawr arrimood ayaa imminka Soomaaliya aad uga hooseeya heerkii dhawr sano ka hor, kuwaas oo u baahan in la dar-dar geliyo si horumar dhab ah looga gaaro.
Himilo kasta waxaa hoos taga arrimo u baahan in la fuliyo. Middkastana wuxuu u baahandoonaa dhaqaale, dhisme hay’adeed, teknooloji, kaabayaal iyo maalgelin kale. Nabadgelyo,xasilooni iyo jawi siyaasadeed oo deggen ayaa saldhig u ah xaqiijinta bartilmaameedyadan.
Qorshaha Dib-u-soo-kabashada iyo horumarinta dalku wxuu ku salaysan yahay seddexdan arrimood ee jmuhiimka ah”
Nabadayn qoto-dheer iyo dib-u-dhiska maamul wanaag iyo ku dhaqanka sharciga
Xoojinta adeegyada asaasiga ah(waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha)
kaabaysaaha iyo hawlaha kale ee kobcinta dhaqaalaha, shaqaalaynta iyo dakhliga.
4. Ma jiraan labo ama seddex ka mid ah HHM-ka oo Soomaaliya loo xuli karo oo xoogga la saaro, halkii dhinacyo badan laga wejihi lahaa iyadoo dhaqaaluhu xaddidan yahay
nooc kamkid ah HHM-ka ayaa u baahn insi gaar ah xoogga loo saaro.marka la muujinayo himilda sida waxbarsahada asaasiga ah ee caalamiga ah,tusaale, ma ah mid waqti dheer qadan doonta, ka hor inta an loo gudbin noocda calculus ee isku-dheellitirka dheddig-laboodka, cudurrda la isku gudbiyo iyo saboolnimada.
HHM-ka lama kala go’doomon karo ee waa isku xiran yihiin. Tusaale, saboolnimadu waxay salka ku haysaa dhibaatooyin fara badan. Haddii Soomalidu aysan sabool ahayn, dhibaatooyinka kale waa la xallin lahaa. Waxaa furad loo heli lahaa biyo nadiif ah,cunto nafaqo leh iyo waxbarasho iyo daryeel caafimaad. HHM-ku wxuu ku wejahan yahay cirib-tirka saboolnimada xad-dhaafka ahiyo gaajda, waayo waxay horeedi karaan horumar goobo farabadan laga gaaro.
Inkastoo dhammaan HHM-ku ay mudnaan siman leeyihiin, ciribtirka saboolnimadu dhab ahaantii ma ahan tan ugu muhiimsan? Miyeysan dhammman dhibaatooyinka kale ee Soomaliya saamayn ku lahayn arintan awgeed?
6. Waxaad xustay waxqabad iyo dhaqaale dheeraad ah oo deeq-bixiyayaasha laga helo, haddii la doonayo fursad ay Soomaliya ku xaqiijin karto HHM-ka. Sidee looga hirgelin karaa jawi aan xasiloonayn,iyadoo ilaa imminka waxqabadku aad u yar yahay?
Labo arrin ayaa jira. Tan hore, waa iyadoo ilaa xad daal iyo niyad-jab ay deeq-bixiyayaashu kala kulmeen xiriirka Soomaaliya. .tani dhab ahaantii waa faham la’aan. Waana culays iyo khatar in laga hawlgalo jawi aan xasiloonayn, iyadoo hay’aduhuna niyad-jab kala kulmaan marka ay arkaan dib-u-dhaca mashaariicda, ayna feejignaan ka muujiyaan khatarta shaqaalahooda awgeed.
Xaqiiq ayaa jirta, waana inaan iyada ku shaqaynaa.
Dhibicda labaad, dadaal joogto ah oo laga sameeyey goobo Soomaliya ka mid ah ayaa hawlgallada isku-duwidda iyo horumarintu xaqiijiyeen qaar ka mid ah sheekooyin xiiso leh. Isticmaalka Dheryaha Qadceedda Solarka ku shaqeeya oo lagu daray siyaasadda qaranka ayaa hoos u dhigay waxyeelayntii dhirka iyo dhoofinta dhuxusha. Waxa iyan soo kordhaya daaweynta batayeysan ee adadka qaba dulinka HIV/AIDS-ka,iyadoo carruur badanna lagy seexiyo maro-kaceeco daaweysan.
Waa inaan hoos loo dhigin dadaalada noocaan ah iyo natiijooyinka la xaqiijiyey ama waxqabadka imminka loo baahan yahay.
kuma wejahna oo keliya arrimaha la cabbirin maro halkii laga xaddidi lahaa. Waa maxay dhibicda tilmaamaysa in carruurta Dugsiyada hoose/dhexe ay gaarayaan 45% haddii aysan buugaag jirin ama tababbarad macallimiintu ay liitaan?
Qiimayntatayeysan waa xudunta ugu muhiimsan marka loo dhaqaaqayo asaaska iyo la socoshada hannaanka ka dhanka ah bartilmaameedka, balse waxaa iyana mudnaan gaar ah leh xogta tiraynta. Wax badan oo ay adagtahay in la cabbiro ayaa jira, balse waa ay haboontahay in wax badan la qiyaaso halka celcelis tiro oo keliya laga samayn lahaa.
HHM-ka muhiim ma ahan tayo, balse waxaa loo baahan yahay waxqabad dhab ayh oo faa’iidooyinkiisa laga dhex-arki karo hadafka HHM-ka. Tusaale, dhinaca waxbarashada Soomaaliya, waxaa xusid mudan iskaashiga ka dhexeeya WFP, UNICEF and qaar ka mid ah Hay’adaha aan dawliga ahayn(NGOs) oo quudiyey 117 dugsi goobaha ay abaaraha iyo dagaalladu saameeyeen, kuwasoo ay ilaa 33,000 arday ay heleen. Waxay kaloo tababarro u fidiyeen 1800 hormuudyada macallimiinta. Barnaamijyadanin waxy kordhiyeen tayada iyo waaya-aragnimada waxbarashada ardayda wallow aysan xogtu waafaqsanayn HHM-ka.
sida ay xustay xogta Soomaaliya ee (koofurta iyo bartamaha)inay ku tusmaysan atahay xaalad gurmad bini’aadminimo, sidee ayeye ugu habboontahay HHM-ka?
Dhammaantood waxaay kusugan yihiin xaalad qalafsan. Mana sahlana in si fudud lagu xaqiijiyo, balse dhab ahaantii waxay muujinaysaa mudnaanteeda.
Mmmaxaa ku dhici doona Soomaaliya? Si cad waxa u muuqan kara inaan la xaqiijin HHM-ka sannadka 2015.
Waddamadu way kun kalduwan yihiin marxaladaha socdaalka lahgu higsanayo HHM-ka. Waa dhan in Soomaaliya ay ka mid tahay waddamada horumarkoodu hooseeyo,iyadoo arrimuhu meelaah qaarkood dib-u-dhac ku yimid.
Rajo ayaa jirta, balse haddii madaxda dalku ay si adag isga xilsaaraan waajibaadka sare u qaadista heerka nolosha saboolka ah,arrimuhu waa hagaagayaan.
Immisa ayaa bixi doonta xaqiijinta HHM-ka Soomaaliya? Mase danaynayaan Deeq-bixiyayaashu inay taageeraan?
Dhab ahaantii waa ay adagtahay in la ogaado inta ku bixi karta xaqiijinta HHM-ka Soomaaliya. Barnaamijka dib-u-soo-kabashada iyo Dib-u-dhiska(RDP) ee Qorshaha kala guurka ah ee QM iyo warqadda istraatiijiyadda dalka ee Midowga Yurub(EU) oo dhammaantood ku wejahan siyaasadda iyo horurka dhaqaalaha.
Qiimaha barnaamijka(RDP) ayaa lagu qiyaasay US$2.2bn. nooca maaliyadan ayaa loogu lato galay xaqiijinta gargaarka HHM-ka. Hadba sida ay Soomaalidu uga guulaysato xasiloonida iyo nabadda ayaa ku dhiirigelin doonta inay hay’ada deeqda bixiyaa waxqabad dhab ah la yimaadaan.
DFKMG ahi diyaar ma u taahya hufnaanta maamulka ee HHM-ka?
DFKMG ah waxa horyaalla caqabado shuruudaha abuuritaanka jawi xasiloon oo Soomaaliya ka abuurma – waa arrin caadi ah waddamada dunida oo dhan – inay xil adag iska saaraan mas’uuliyadda muwaadiniinta. Waxaa jiraa dadaal lixaad leh oo ku wejahn taageerada DFKMG ah min hay’adaha kale ee horumarinta iyo kobcinta heerka nolosha Soomaalida.waa muhiim kmarka hore inay DFKMG ahi la timaaddo waxqabad lagu xaqiijinayo HHM-ka sida ugu habboon ayna weydiisato kaalmo deeq-bixiyayaasha iyo La hawlagalayaasha marka ay u baahdaan.
Dadaalka ugu mudan waa sidii loo xaqiijin lahaa nabadda iyo dib-u-heshiisiinta. Dadaalladani waxay raad ku yeelan doonaan HHM-ka iyo sidii ay Hoggaamiyaasha dalku iskaga xilsaari lahaayeen Samafalka dadka Soomaliyeed.
Sidee ayey uga faa’iidaysan doonaan HHM-ka dadka kala duwan ee Soomaaliya marxaladda coladaha?
Dhab ahantii, marka xasilooni la helo,muwaadiniinta Soomaalidu way ka faa’iidaysan doonaan HHM-ka. Mashaariicda ay beesha caalamku taageerayaan way ka socdaan qaybo badan oo Soomaaliya ah, dhammaantoodna waxa la faray taabbagalinta HHM-ka.
sidee ayey HHMku gacan uga gaysan doonaan xad-gudubyada ka dhanka ah habeenka iyo arrimaha ugu waaweyn ee kala dheeraynta dhalmada?
Arrimaha dhaqanka iyo diintu aad bay xaasi u yihiin, waana in loo wejahaa si taxadar leh. Qaar ka mid ah hay’adaha La hawlgalayaasha ayaa ku tallabsaday arrimahan iyaga ah. Marka nabadgelyo laga helo Soomaaliya, ayaa laga rajaynayaa in dawladdu ay saxiixdo shuruucda caalamiga ah ee kala duwan ee laga doonayo inay dawladdu ilaaliso noockasta oo xad-gudubyada ka dhanaka ah xuquuqda ay leeyiihn. Iyadoo caalamku kula xisaabtamayo dalkasta oo ku gabood-fala heshiisyan. QM iyo la hawlgalayaasheeda Soomaliya waxay si aad u ah u danaynayan sare u qaadista arrimaha nolosha haweenka la xiriira.
Waa maxay sababta aan warbixintan Somaliland loogu soo bandhigaynin?
Dhammaan QM way ka hawlgashaa soomaaliya, taasina way iska caddahay inay Somaliland ku jiro. Warbixnta HHM-ku waxay ka kooban tahay xogta min dhammaan gobollada Soomaaliya oo Somaliland ku jirto.
Waxaa jirta laba sababood oo ann loogu soo bandhigaynin halkaas. Tan kowaad, wa iyadoo dawladda Somaliland aysan mid doonayn, iyadoo taas ku salaynaysa inay gooni qaranimadeeda gooni isugu taagtay, inkasyoo aysan taasi aysan ku salaysaana warbixinta HHM-ka iyo hawlgallada QM ay ka fuliso Soomaaliya inteeda kale.
Tan labaad, oo aad muhiim u ah, QM iyo dawladda Soomaaliya oo aad u danaynaya in ilaa xad sare loo qaado saamaynta ay warbixintani ku yeelan karto goobaha lagu soo bandhigayo ee caqabadaha adag ay horyaalaan xaqiijinta HHM-ka. Somaaliland waxay ka jira hay’ado iyo kaabayaal wax ku ool ah,kuwaas oo si macquul ah looga rajaynayo horumar weyn marka loo eego Soomaaliya inteeda kale. Hase yeeshee, waxaa muhiim ah in la fahmo, xitaa maqnaanshaha noocan kaabayaasha dawladda iyo mamuulka, arrimuhu waa bilowgii sidii Soomaaliya hore loogu dhaqaajin lahaa shuruudaha hawlgallada ee ku wejahan HHM-ka.
La xiriir: Namita Mediratta namita.mediratta@undp.org ama Sue Morrell sue.morrell@undp.org , ama telephone +254 720 204 992.